Elizabeth Taylor (သို့မဟုတ်) တစ်ခေတ်တစ်ခါက သတင်းကြီးတဲ့ ရွှေမင်းသမီးရဲ့ အကြောင်းမလှသောဘဝဇာတ်လမ်း - For her Myanmar
Elizabeth Taylor (သို့မဟုတ်) တစ်ခေတ်တစ်ခါက သတင်းကြီးတဲ့ ရွှေမင်းသမီးရဲ့ အကြောင်းမလှသောဘဝဇာတ်လမ်း
Celebrity News, News>Women News
ယောင်းတို့ရေ…Elizabeth Taylor ဟာဆိုရင်တော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အင်မတန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီးပေါ့။ ရုပ်ရည်ချောမောလွန်းတဲ့အပြင် ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ရုပ်ရှင်ဆုပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းအားကျခဲ့ရတဲ့ သူ(မ)ရဲ့ ဘဝက ထင်သလိုမလှပခဲ့ပါဘူး။
Elizabeth ကို ၁၉၃၂ ခုနှစ်၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ(မ)ရဲ့ ငယ်ဘဝက သာမန်လူတွေလောက်တောင် ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ အသက် (၉) နှစ်အရွယ်တည်းက ကင်မရာရှေ့မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ သူ(မ)ဟာ အရက်သမားဖခင်ရဲ့ မူးလာတိုင်း ဒေါသတကြီးရိုက်နှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ငယ်စဉ်တည်းက စီးပွားရေးသမား ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ အသုံးချခြင်းကို ခံရတဲ့အပြင် တစ်ခါကများဆိုရင် စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း အော်ဟောက်ပြောဆိုတာကိုတောင် ခံခဲ့ရသူပါ။ အသက် (၁၄) နှစ်မှာတော့ သူ(မ)ပါဝင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ လျှမ်းလျှမ်းတောက်ပေါက်ခဲ့ပြီး Elizabeth Taylor ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာလည်း တစ်ဟုန်ထိုးတက်သွားပါတော့တယ်။
Related article >>> Coco Chanel (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီးဖက်ရှင်လောကကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သူ
သူ(မ)အသက် (၁၇)နှစ်မှာ မီလျံနာတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပေမဲ့ အိမ်ထောင်သက် ကြာရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယမြောက် ဒီယောက်ျားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ထဲ ပါပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆင်မပြေမှုပေါင်းများစွာ ကြုံခဲ့ရပြီး ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ Elizabeth မှာ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင် (၇) ဆက် ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခု အဖတ်တင်ကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။
သူ(မ)ရဲ့ နောက်ဆုံးခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တာကြောင့် မဲဆွယ်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ သူ(မ)အနေနဲ့ ခရမ်းရောင်ကို ဝတ်ဆင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ခရမ်းရောင်က သစ္စာတရားမဲ့တဲ့အရောင်မို့လို့ပါတဲ့။
“နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ မိန်းမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရတာတွေများတယ်။ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လိုပဲ” လို့ Elizabeth က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့် ဝေဖန်မှုများစွာကိုလည်း အကြိမ်အဖန်များစွာခံခဲ့ရပေမဲ့ Elizabeth ကတော့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Related article >>> ကက်သရင်း ဂရေဟမ် သို့မဟုတ် လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး အာဂအမျိုးသမီးတစ်ဦး
မွေးရာပါ ပင်မကျောရိုးကွေးတဲ့ရောဂါဟာ Elizabeth ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးစမ်းသပ်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ “မှန်ထဲကြည့်လိုက်တိုင်း ကျောရိုးက ကွေးကောက်နေတာ ကျွန်မမြင်ရတယ်။ ဆရာဝန်တွေကတောင် ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးလို့ လက်မြှောက်ရတဲ့အထိပဲ” လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးကံတင်မက ကျန်းမာရေးကံကလည်း ဆိုးလွန်းတဲ့ သူ(မ)ပါပဲ။ တင်ပါးရိုးနှစ်ခုလုံးကို အစားထိုးကုသခဲ့ရပြီး ဦးနှောက်အကျိတ်လည်း ခွဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ နှလုံးခွဲစိတ်မှုတွေလည်း လုပ်ခဲ့ရပြီး သူ(မ)ရဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုက မအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
Related article >>> စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံထဲက အံ့သြဖွယ်အမျိုးသမီး နယ်လီ ဘလိုင်း
သတင်းကြီးတဲ့ ရွှေမင်းသမီး Elizabeth Taylor ဟာ အော်စကာနှစ်ဆုပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး သူ(မ)ပါဝင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဟာ သမိုင်းမှာ နာမည်အကျော်ကြားဆုံး ရုပ်ရှင်စာရင်းဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ(မ)က အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါသည်တွေကို အားပေးသူတစ်ယောက်ပါ။
ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် (၇၉) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီးဟာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ပါစေ သမိုင်းတစ်လျှောက်ကျော်ကြားခဲ့ပြီး ဂန္ထဝင်တွင်ခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ…
ယောငျးတို့ရေ…Elizabeth Taylor ဟာဆိုရငျတော့ တဈခတျေတဈခါက အငျမတနျနာမညျကွီးခဲ့တဲ့ မငျးသမီးကွီးပေါ့။ ရုပျရညျခြောမောလှနျးတဲ့အပွငျ ပီပွငျတဲ့သရုပျဆောငျခကျြတှကွေောငျ့ ရုပျရှငျဆုပေါငျးမြားစှာရရှိခဲ့သူတဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ လူတိုငျးအားကခြဲ့ရတဲ့ သူ(မ)ရဲ့ ဘဝက ထငျသလိုမလှပခဲ့ပါဘူး။
Elizabeth ကို ၁၉၃၂ ခုနှဈ၊ အင်ျဂလနျနိုငျငံ၊ လနျဒနျမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ သူ(မ)ရဲ့ ငယျဘဝက သာမနျလူတှလေောကျတောငျ ပြျောရှငျစရာမကောငျးခဲ့ပါဘူး။ အသကျ (၉) နှဈအရှယျတညျးက ကငျမရာရှမှေ့ာ သရုပျဆောငျခဲ့ရတဲ့ သူ(မ)ဟာ အရကျသမားဖခငျရဲ့ မူးလာတိုငျး ဒေါသတကွီးရိုကျနှကျခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။
ငယျစဉျတညျးက စီးပှားရေးသမား ရုပျရှငျထုတျလုပျသူတှရေဲ့ အသုံးခခြွငျးကို ခံရတဲ့အပွငျ တဈခါကမြားဆိုရငျ စီးပှားရေးသမားတဈယောကျရဲ့ ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျး အျောဟောကျပွောဆိုတာကိုတောငျ ခံခဲ့ရသူပါ။ အသကျ (၁၄) နှဈမှာတော့ သူ(မ)ပါဝငျထားတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားဟာ လြှမျးလြှမျးတောကျပေါကျခဲ့ပွီး Elizabeth Taylor ဆိုတဲ့ နာမညျဟာလညျး တဈဟုနျထိုးတကျသှားပါတော့တယျ။
Related article >>> Coco Chanel (သို့မဟုတျ) အမြိုးသမီးဖကျရှငျလောကကို ကိုငျလှုပျခဲ့သူ
သူ(မ)အသကျ (၁၇)နှဈမှာ မီလြံနာတဈယောကျနဲ့ လကျထပျခဲ့ပမေဲ့ အိမျထောငျသကျ ကွာရှညျမခံခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယမွောကျ ဒီယောကျြားနဲ့ လကျထပျတဲ့အခြိနျမှာတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူက လယောဉျပကျြကတြဲ့ထဲ ပါပွီး ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ သူငယျခငျြးနဲ့ လကျထပျခဲ့ပါတယျ။
အဆငျမပွမှေုပေါငျးမြားစှာ ကွုံခဲ့ရပွီး ဇာတျသိမျးမှာတော့ Elizabeth မှာ စုစုပေါငျးအိမျထောငျ (၇) ဆကျ ရှိခဲ့တယျဆိုတဲ့ နာမညျတဈခု အဖတျတငျကနျြခဲ့ပါတော့တယျ။
သူ(မ)ရဲ့ နောကျဆုံးခငျပှနျးဖွဈသူဟာ နိုငျငံရေးသမားဖွဈတာကွောငျ့ မဲဆှယျတဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ သူ(မ)အနနေဲ့ ခရမျးရောငျကို ဝတျဆငျခှငျ့မရခဲ့ပါဘူး။ အကွောငျးကတော့ ခရမျးရောငျက သစ်စာတရားမဲ့တဲ့အရောငျမို့လို့ပါတဲ့။
“နိုငျငံရေးသမားတဈယောကျရဲ့ မိနျးမဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ နှုတျပိတျနခေဲ့ရတာတှမြေားတယျ။ စကျရုပျတဈရုပျလိုပဲ” လို့ Elizabeth က ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ အိမျထောငျရေးရှုပျထှေးမှုတှကွေောငျ့ ဝဖေနျမှုမြားစှာကိုလညျး အကွိမျအဖနျမြားစှာခံခဲ့ရပမေဲ့ Elizabeth ကတော့ ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Related article >>> ကကျသရငျး ဂရဟေမျ သို့မဟုတျ လှမျးမိုးမှုအရှိဆုံး အာဂအမြိုးသမီးတဈဦး
မှေးရာပါ ပငျမကြောရိုးကှေးတဲ့ရောဂါဟာ Elizabeth ဘဝရဲ့အကွီးမားဆုံးစမျးသပျမှုတှထေဲက တဈခုပါပဲ။ “မှနျထဲကွညျ့လိုကျတိုငျး ကြောရိုးက ကှေးကောကျနတော ကြှနျမမွငျရတယျ။ ဆရာဝနျတှကေတောငျ ဘာမှမလုပျပေးနိုငျပါဘူးလို့ လကျမွှောကျရတဲ့အထိပဲ” လို့ ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။
အိမျထောငျရေးကံတငျမက ကနျြးမာရေးကံကလညျး ဆိုးလှနျးတဲ့ သူ(မ)ပါပဲ။ တငျပါးရိုးနှဈခုလုံးကို အစားထိုးကုသခဲ့ရပွီး ဦးနှောကျအကြိတျလညျး ခှဲထုတျခဲ့ရပါတယျ။ နှလုံးခှဲစိတျမှုတှလေညျး လုပျခဲ့ရပွီး သူ(မ)ရဲ့နောကျဆုံးခှဲစိတျမှုက မအောငျမွငျခဲ့တာကွောငျ့ ၂၀၁၁ ခုနှဈ မတျလမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
Related article >>> စိတျကနျြးမာရေးဆေးရုံထဲက အံ့သွဖှယျအမြိုးသမီး နယျလီ ဘလိုငျး
သတငျးကွီးတဲ့ ရှမေငျးသမီး Elizabeth Taylor ဟာ အျောစကာနှဈဆုပိုငျရှငျဖွဈပွီး သူ(မ)ပါဝငျတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှဟော သမိုငျးမှာ နာမညျအကြျောကွားဆုံး ရုပျရှငျစာရငျးဝငျတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူ(မ)က အအေိုငျဒီအကျဈရောဂါသညျတှကေို အားပေးသူတဈယောကျပါ။
ကှယျလှနျခြိနျမှာ အသကျ (၇၉) နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ မငျးသမီးကွီးဟာ ဘယျလိုအခကျအခဲတှေ ကွုံခဲ့ဆုံခဲ့ပါစေ သမိုငျးတဈလြှောကျကြျောကွားခဲ့ပွီး ဂန်ထဝငျတှငျခဲ့တာ အမှနျပါပဲ…
Tags: Actress, Biography, celebrity, empowering, flims, Movie, Story, women
လုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှုကို နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အမှား(၇)ခု
မင်မင်တို့ Surprise Box လေးတွေရဲ့ ကံထူးရှင်တွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်တာလဲ ?
Stella March 29, 2019
ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ခေတ်မီလတ်ဆတ်နေဆဲ ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များ
“ပိပိတို့ စကားဝိုင်း”ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ မနန္ဒာပြောပြတဲ့ “ဘုန်း” နဲ့ Feminism အကြောင်း
Wathun May 27, 2019
အုန်းဆီက ဆံကေသာကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့ အုန်းဆီလိမ်းရမှာ ကြောက်တုန်းပဲလား?
Stella May 24, 2019